Qiimaha Kanal Istanbul 75 wuxuu ku kacay Billion TL | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulChannel Istanbul ee Qiimaha 75 Bilyan ee TL
27 / 10 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Madaxweynaha “Recep Tayyip Erdogan” ee “mashruuca waalan” ee Channel-ka Qiimaynta Saamaynta Deegaanka ee Cimilada (EIA) ayaa lagu soo gabagabayn doonaa bisha November ee Xarunta Qiimaynta 28 ee Gudiga Qiimeynta (IDK) la qaban doono. 75 waxaa loo qorsheeyay in la dhammeeyo sanadka 7. 4 kanaalka ayaa laga qodayaa sanadka oo dhan iyo 1.1 waxay lahaan doontaa hal bilyan oo mitir cubic oo qodis ah
28 kanaalka Channel Istanbul, oo ay qorsheysay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa waxaa ku dhawaaqay Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Magaalooyinka bishii Nofembar 2019. Waxaa jira isbeddelo muhiim ah oo ku jira warbixinta EIA, oo lagu dhammeyn doono kulanka IDC. Kharashaadka mashruucan, oo dhex mari doona degmooyinka Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy iyo Başakşehir, qiyaastii dhererkiisu waa 45 km iyo mitir 20.75 oo qoto dheer, wuxuu ku kordhay 60 bilyan TL, oo ​​horey loogu dhawaaqay 75 bilyan TL.
SözcüSida laga soo xigtay warbixinta Özlem Güvemli, 20 marka loo eego baaxadda Mashruuca Kanal Istanbul In faylka Codsiga ee EIA loo gudbiyey 2018 bishii Febraayo, waxaa la qorsheeyay in la abuuro jasiiradaha kooxda 3 ee ku yaal Badda Marmara iyada oo la adeegsanayo agab ku habboon qoditaanka kanaalada. Iyada oo ay ugu wacan tahay daraasadaha injineeriyada socda iyo suuragalnimada, waxaa lagu dhawaaqay in jasiiradahaas looga tanaasulay sababtoo ah looma tixgelin inay dhaqaale ahaan waxtar leeyihiin. Mar labaad isla feylka Sazlıdere Marina ee badbaadada marinka wadida iyo shaqada injineernimada oo faahfaahsan ayaa la joojiyay ka dib markii la duubay. Badda leh kun xero xero oo xNUMX ah ayaa laga dhisi doonaa harada Küçükçekmece ee ku taal albaabka Badda Marmara.
Channel Istanbul 7 in la dhammaystiro sannad kasta
Xilligii horey loo sii qorsheysan jiray hal sano ayaa sidoo kale loo kordhiyay illaa 2 sano. Warbixinta dhexdeeda, waxaa lagu cadeeyay in xoogaa yar ay sababi karto kordhinta mashruuca oo dhan sidaas darteedna xilliga diyaarinta ee sanadka 2 uu noqon doono hab nabdoon oo qorsheysan. Xaaladdan oo kale, muddada maalgashigu waxay noqon doontaa sanadka 7 waxaana la sheegayaa in ilk Sannadkii ugu horreeyay ee 7 ee la saadaaliyay sannadka 2 (laga bilaabo wajigii qandaraaska) maalgashiga loo tixgaliyay inuu yahay xilli diyaarinta (dhammaystirka maalgelinta, howlaha garoonka, diyaarinta mashaariicda hirgelinta, shaqada abaabulka, iwm).
Qulqulka Canal Istanbul wuxuu socon doonaa sanadaha 4
Sida lagu sheegay warbixinta, wajiga qodista ee mashruucu wuxuu sidoo kale socon doonaa sanadaha 4. Qiyaastii 275 milyan oo mitir cubic ah ayaa laga qodayaa sannad walba. Wadarta tirada qodista ee laga sii daayo kanaalka waxaa loo xisaabiyey ku dhawaad ​​1 bilyan 155 milyan 668 kun oo mitir cubic. Qiyaastaan, 1 bilyan 79 milyan 252 kun oo mitir cubic oo dhul ah, 76 milyan 416 kun oo mitir cubic oo badda ah iyo baaritaanka harada ayaa ka koobnaan doona. 1,1 milyan oo cubic mitir oo ah 800 bilyan oo mitir cubic mitir oo la qorsheeyay in lagu fuliyo dhulka weheliya kanaalka waxaa lagu fulin doonaa qaybta ku xiran Badda Madow.
Mid ka mid ah hawlgalka Kanal Istanbul ayaa la go’aamiyay
Iyada oo ay sabab u tahay daraasadihii lagu sameeyay baaxadda hawlgalka (taraafikada) iyo go’aaminta mabda'a hawlgalka kanaalka baaxadda Mashruuca Kanal Istanbul, waxaa la go'aamiyay in loo maro kanaalada hal waddo. Marka la eego baaxadda Mashruuca Kanal Istanbul; Kanaalka, aagagga socodsiinta xaaladaha degdegga ah, xarumaha wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah, soo gelitaanka iyo kanaalka dhismayaasha, kaabayaasha iyo dhismayaasha waaweyn sida nidaamyada taraafikada maraakiibta, dekada, xarunta logistics, marinnada, dhismayaasha xeebaha ee marinka marin ka siin doona kanaalka meelaha looga baahan yahay, qalcadaha iyo tas-hiilaadka xeebaha sida kuwa dhulka lagu aaso.
Mashaariicda lagu hormarinayo iyadoo la dhexgalinayo Mashruuca Kanal Istanbul ayaa kala ah; Dekedaha Marmara iyo Dekedaha Badda Madoow, Küçükçekmece Yacht Harbor iyo Madaddaalo Xeebta Madow ee Badda Madoow iyo buuq loojistiko ah. Wadarta 54 milyan 605 kun ee 865 mitir murabac ayaa laga dhisi doonaa Xeebta Badda Madoow si loo helo madadaalo iyo saadka. Maqaalka waxaa loo isticmaali doonaa qoditaanka.
Waxaa jira dhul beereed, qaybo qayb kaynta iyo degsiimooyinka iyo maydadka biyuhu maraan iyo hareeraha jidkan guud ahaan. Meelahan biyuhu ka mid yihiin, Sazlıdere Dam, oo maalin kasta bixisa baahiyaha biyaha ee Istanbul ee '24-25', ayaa la tirtiri doonaa maadaama uu ku yaal jidka.
8-10 kun oo qof ayaa ka shaqeyn doona dhismaha Kanal Istanbul
Ku dhowaad 8-10 ayaa la shaqaaleysiin doonaa inta lagu gudajiro wejiga dhismaha ee mashruuca, halka 500-800 la shaqaaleysiin doono inta lagu gudajiro marxaladda hawlgalka. Goobta waxqabadka dhismaha lagu fulin doono, oo lagu qeexay inay tahay goobta shaqada, waxaa loo xisaabiyaa qiyaastii xNUMX milyan oo mitir oo laba jibaaran. Marka la dhammaystiro howlaha dhismaha ayaa looga tagi doonaa baahiyaha kale ee bulshada ee la jaray si looga gudbo xadka qaab dhismeedka kanaalka oo noqon doona 63.2 milyan mitir oo laba jibaaran. Aagga loo adeegsan doono kanaalka waxaa lagu dhawaaqay 25.75 milyan oo mitir murabac.
Canal Istanbul waxay wax yeeleyn doontaa hoyga shimbiraha
Wadarta noocyada 21 iyo noocyada shimbiraha 44 ee ay leeyihiin qoyska 124 ayaa la aqoonsaday iyada oo la raacayo dariiqa kanaalka. Isagoo sheegaya in qaar ka mid ah noocyada shimbiraha ee lagu cadeeyay warbixinta ay u isticmaalaan qaybo ka mid ah aagga mashruuca sida aag xilliga qaboobaha, goobta taranta iyo aagag, waxaa loo maleynayaa in saameynta ugu weyn ee waxqabadka mashruuca ee ku saabsan shimbiraha ay noqdaan bey'ada. Haro Küçükçekmece Lake waa aagga ugu qanisan marka loo eego kala duwanaanta noocyada ee aagga mashruuca. Waxay u abuurtaa meelaha ku habboon hareeraha iyo maydadka biyaha ee labada nooc ee xilliga qaboobaha, noocyada taranta iyo noocyada guuraya inta ay haajirayaan. Khasaaraha ka dhasha goobahan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa taranka iyo jiilaalka dadka noocyada qaar aad u muhiim ah. Si looga hortago kuwan, waxaa lagu talinayaa in qaar ka mid ah harada Küçükçekmece loo kala sooco iyada oo lagu dejinayo xaalkeeda hadda iyo in degaan la mid ah aagagga cawska ee Altınşehir lagu dhex sameeyo aagga harada harsan.
Gegada dayuuradaha ee qasabka ah
Baklalı, Boyalık, dhul beereedka Dursunköy ee agagaarka daallan ama xaaladaha cimilada xun inta lagu gudajiray socdaalka, taas oo aan usii gudbi kareynin caarada, gaar ahaan shimbiraha hijrada ah ayaa loo wareejiyay muhiimada muhiimka ah. Intii lagu gudajiray deyrta, adhi aad u balaaran ayaa soo degay meelaha beeraha ku yaal ee Jaamacada Istanbul ee waqooyiga-galbeed ee Lake Küçükçekmece waxayna tiri, ile Iyada oo la waayo goobahan, waxaa suurta gal ah in la dego aagag furan oo u dhaw Çatalca. Ma jiraan goobo hore loo heli karo oo loogu talagalay shimbiraha ka tallaaba dariiqa loo yaqaan 'Strait Strait' guga. Xaaladdan oo kale, Shimbiraha ayaa daruuri u ah inay galaan dhul-daaqsimeedka agagaarka garoonka diyaaradaha ee cusub ama daaqadaha ku xeeran Çatalca. Iyada oo la tixgelinayo masaafada ay aagaggan u leedahay aagagga hadda la joogo, waxaa la saadaalinayaa in shimbiraha ay gaari karaan aagaggaas iyada oo aan wax dhibaato ah la qabin waxaana la saadaalinayaa in aysan wax saameyn xun ah ku yeelan doonin shimbiraha isticmaalaya hoy amaçlı.
Shaqooyinka Kanal Istanbul waxay ka bilaabatay 2011
Warbixinta ayaa sidoo kale sharraxday taariikhda mashruucu. Iyada oo ay shaqadu ka bilaabantay 2011, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Agaasinka Guud ee Wadooyinka, kana mid ah xulashooyinka 5, oo ka bilaabaya barta kala soocda Badda Marmara iyo Küçükçekmece Lake, oo sii marta Sazlıdere Dam Basin, oo gaareysa dhanka bari ee Dursunköy isla markaana gaartay bariga Baklalı Village. Ka dib markii ay uga gudubtay Badda Madoow dhanka bari ee wadada Lake Terkos una sii gudubtay dariiqa biyo-mareenka ee Istanbul "Mashruuca Channel Istanbul" waxaa la go'aamiyay inuu noqdo wadada ugu habboon.
4 Bishii Febraayo 2017, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Agaasinka Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha (AYGM) ayaa lagu wargaliyay in howlaha la xiriira fulinta Mashruuca Kanal Istanbul ee la jaan qaada wadadan la go'aamiyay. Waxaa la sharraxay in AYGM ay ka bilaabatay hindisada mashruuca sahanka-mashruuca 14 Luulyo 2017 oo ay biloowday shaqada 8 Agoosto 2017 iyada oo la dhammaystirayo habraacyada lagama maarmaanka ah.
3. Madaarka si ay uga sarreyso bilyan XIUMX
Shirkadda Isticmaalka Magaalada Istanbul ayaa sanad kasta sanad kasta ku baxda 6.5
Goorma ayey bilaabatay shaqadii Kanal Istanbul?
Ballaca Channel Istanbul
Channel Istanbul wuxuu ku dhamaan doonaa inta sano
Kanaalka ayaa kicin kara dhulgariirka marmara ee magaalada Istanbul
Immisa qof ayaa ka shaqeyn doona dhismaha Kanal Istanbul
Musiclidere Dam Basin